Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Disney Cruise Line oo ah meelo cusub 2023
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • saaciday inay
Horaantii 2023, Disney Cruise Line waxay ku laaban doontaa meelaha ugu kulul ee Bahamas-oo ay ku jiraan jasiiradda gaarka loo leeyahay ee Disney, Castaway Cay-iyo sidoo kale Kariibiyaanka iyo Riviera Meksiko, iyagoo ku farxaya martida da 'walba leh fasaxyo hal-nooc ah badda. Safarro kala duwan oo soojiidasho leh ayaa xeebta-ilaa-xeebaha ka dhoofinaya garoomada Maraykanka oo ay ku jiraan Miami iyo Port Canaveral, Florida; New Orleans; Galveston, Texas; iyo San Diego.
Disney Cruise Line waxay abuuri doontaa xitaa madadaalo badan qorraxda sidii hore oo kale iyada oo ay jiraan kala -guuritaanno badan oo ka socda Gobolka Sunshine horaantii 2023, oo booqanaya meelaha kulaylaha Bahamas iyo Caribbean -ka oo dhan. Laba markab ayaa ka soo shiraacanaya Port Canaveral oo u dhow Orlando, Florida, markab saddexaadna wuxuu ka ambabixi doonaa Miami. Safar kasta oo ka yimaada Florida waxaa ka mid ah booqashada jasiiradda gaarka loo leeyahay ee Disney, Castaway Cay.
Ka bixitaanka Port Canaveral, Disney Wish waxay u dhoofaysaa 2023 iyadoo leh saddex iyo afar habeen oo safar ah Nassau, Bahamas iyo Castaway Cay. Dalxiisyada saaran markabka cusub ee Disney waxay isku daraan madadaalo cusub iyo sheeko -sheegid, oo leh adeeg aan la bar -baryin iyo daqiiqado sixir ah oo ay martidu jecel yihiin marka ay la safrayaan Disney.
Sidoo kale Port Canaveral, Disney Fantasy waxay sannadka ku bilaabi doontaa shiraacdo toddobo habeen ah oo loo aadi doono dhowr meelood oo loogu jecel yahay Bariga iyo Galbeedka Caribbean-ka. Intaa waxaa dheer, hal doon oo sideed habeen oo gaar ah leh waxaa ka mid ah laba maalmood oo Bermuda ah oo qurux badan, halkaas oo martidu ay ku qoraxi karaan xeebaha ciidda casaanka ah ee jasiiradda, ku raaxeysta cayaaraha biyaha ee xiisaha leh ama sahaminta jasiiradda Crystal Caves ee dhulka hoostiisa ah.
Laga soo bilaabo Miami, riyada Disney waxay bilaabi doontaa noocyo kala duwan oo ah afar iyo shan habeen oo safarro ah oo loo aado deegaannada ay ka mid yihiin Grand Cayman, Nassau, Castaway Cay iyo Cozumel, Mexico. Xitaa raaxeysiga jasiiradda gaarka loo leeyahay ayaa dusha saaran oo leh hal safar shan habeen oo gaar ah oo ay ku jiraan laba joogsi oo ku yaal Castaway Cay.
Dhammaan bixitaannada Florida, martidu waxay ku farxi karaan socdaal wax siiya xubin kasta oo qoyska ka mid ah, iyagoo isku daraya quudhsiga iyo nasashada meelaha kulaylaha, fududeynta iyo ku raaxaysiga maraakiibta badda, iyo madadaalada iyo adeegga heer caalami ah ee Disney fasax.
Baxsashada Kulaylaha ee Texas iyo New Orleans
Janaayo iyo Febraayo, Disney Magic waxay ka soo shiraacan doontaa Galveston, Teksas, iyada oo loo mari doono afar-, shan-, lix- iyo todobo habeen oo safar ah Bahamas iyo Galbeedka Caribbean-ka. Dekedaha kuleylaha ah ee loogu yeero shiraacyadaas waxaa ka mid ah Grand Cayman iyo sidoo kale Cozumel iyo Progreso, Mexico.
Bishii Febraayo iyo Maarso, Disney Magic wuxuu "hoos u dhacayaa bayou" markii ugu horreysay xilligii ugu horreeyay ee New Orleans. Ka bixitaanka wadnaha The Easy Easy, oo ku teedsan Wabiga Mississippi ee xoogga leh, afar-, shan- iyo lixda-habeen shiraac ayaa wici doona meelaha kulaylaha ee Grand Cayman iyo Cozumel.
Kahor ama ka dib safarkooda Disney, martidu waxay ku biiri karaan Magaalada Crescent si ay u dhadhamiyaan dhadhanka kala duwan ee cunnada New Orleans ee caanka ah, ku raaxeystaan ​​heesaha macaan ee muusigga jazz ee adduunka caan ka ah oo ay gartaan indhaha iyo dhawaaqyada halyeeyada leh Amiiraddii iyo Raha. ”
Dhammaan safaradii 2023 ee Disney Magic waxaa ku jira laba ama saddex maalmood oo badda dhexdeeda ah si loogu raaxeysto madadaalo aan xad lahayn, madadaalo, nasasho iyo xusuuso dusha saaran.
Baja Peninsula Getaways oo ka socota San Diego
Mucjisada Disney waxay ku laaban doontaa Xeebta Galbeed, iyagoo ka soo shiraacanaya San Diego bilaha Abriil iyo Maajo. Maraakiibta loo raaco Baja, Mexico iyo Riviera -ka Mexico ayaa martida u rari doona xeebaha qorraxdu ka buuxdo oo leh dhaqan firfircoon, xeebo ciid dhalaalaysa, tacaburro dibadeed oo firfircoon iyo hawlo biyo oo xiiso leh.
Doonnida ka timaadda San Diego waxay dhererkeedu noqon doontaa saddex ilaa toddoba habeen. Qaar ka mid ah shiraacyada gacanka Baja ayaa u yeeri doona magaalo xeebeedka soo jiidashada leh ee Ensenada, oo caan ku ah biyaha buluugga ah ee buluugga ah iyo dhul buuraley ah oo adag. Bixitaanno badan ayaa ka mid noqon doona booqashada Cabo San Lucas, oo ah meel loo jecel yahay oo leh qaabab dhagax weyn iyo xeebo ciid cad ah.
Toddobo habeen oo safar ah ayaa u dhoofi doona Mazatlan, “Pearl of the Pacific,” oo ay ka buuxaan mucjisooyin dabiici ah oo soo jiidasho leh, dhaqan kobcaya iyo taariikh midab leh, iyo Puerto Vallarta, oo ah xeebta quruxda badan ee xeebta oo ku teedsan qalooca Banderas Bay oo xuduud la leh buuraha Sierra Madre ee cajiibka ah.